Spotify sy Musixmatch: Ny karaoke an'ny Spotify | Vaovao IPhone
Samy mankafy mihira isika rehetra rehefa manadio miaraka amin'ny lisitra Spotify ankafizintsika, fa Spotify dia manamora kokoa ho antsika, tonga ny karaokan'ny Spotify hiranay miaraka amin'ny mpanakanto ankafizinay ao amin'ny Mac. Spotify indray mandeha dia manaporofo fa mitovy sy mieritreritra ny momba azy io mpanjifa, izay mahatonga ny orinasa hanana vokatra tsara amin'ny fahafaham-po ny mpanjifa.
Amin'ny herinandro ho avy dia havaozina tsikelikely ireo mpanjifan'ny birao Spotify ho an'ny Mac manampy ny safidy MusiXmatch mampifangaro ny tononkiran'ireo hira izay amboarinay amin'ny fomba karaoke madio indrindra. Mba hanararaotana ilay fisehoan-javatra vaovao raha vao voarainay ny fanavaozana, ny hany tokony hataontsika dia ny milalao ny hira ankafizintsika ary manindry ny bokotra «Lyrics» vaovao izay hiseho eo amin'ny faritra ambany ankavanan'ny mpilalao.
Ity fampiasa vaovao ity, araka ny fanazavan'i Spotify tsara, dia avy amin'ny firaisana natolotry ny orinasa soedoà MusicXmatch (orinasa italiana niorina tamin'ny 2010), miaraka amin'ny katalaogin-dahatsoratra mozika lehibe indrindra manerantany misy tononkira 7 tapitrisa amin'ny fiteny 38. Tsy isalasalana fa ny firaisankina dia tanjaka ary iray amin'ireo izay mahafinaritra ny mpampiasa ny serivisy fampitana mozika any Suède Spotify nanangana ny serivisy tamin'ny 2008. Androany dia manana mpampiasa maherin'ny 60 tapitrisa, 15 tapitrisa amin'izy ireo no karama, ao anatin'izany ny mpizara.
Ny fanavaozana Spotify ho an'ny Mac koa dia nanampy fanovana maromaro tohizanay amin'ny antsipiriany:
Famahanana namana vaovao sy nohatsaraina: Izao dia mora kokoa noho ny hatramin'izay ny mahita izay henon'ny olona tianao. Ampidino fotsiny ilay sidebar raha te hahita ireo playlist, hira ary artista henon'ny namanao ianao.
Torohevitra vaovao ho tonga amin'ny fiainana - mozika manasongadina izay miakatra sy midina.
Tsy isalasalana fa betsaka kokoa ankehitriny ny tsaho milaza fa manomana ny serivisy fandefasana mozika manokana i Apple, ireo ao Cupertino dia tokony hijery ireo bandy Spotify ary hanatsara (raha azony atao) ny serivisin'izy ireo, raha tsy izany dia tsy fahombiazana lehibe izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Spotify sy Musixmatch: Karaoke Spotify
Tsindrio, adaptatera ahafahanao mampiasa tadiny hafa amin'ny Apple Watch
Fomba ahazoana tombony betsaka amin'ny famantaranandro Pebble anao